အလွန်လေးလံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွင်၊ EN 12195-3 စံနှုန်းအရ အတည်ပြုထားသော web lashings များအစား EN 12195-2 စံနှုန်းအရ အတည်ပြုထားသော ကြိမ်ကြိုးများဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းကို လုံခြုံစေရန် ကောင်းစွာအဆင်ပြေနိုင်သည်။ဒါက ကြိမ်ဒဏ် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်...
Chain Lashings များကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ
ဤအချက်အလက်သည် Chain Lashings ကို ဘေးကင်းစွာအသုံးပြုရန်အတွက် အဓိကအချက်များကိုသာ အကျုံးဝင်သော ယေဘုယျသဘောသဘာဝတစ်ခုဖြစ်သည်။သီးခြားအပလီကေးရှင်းများအတွက် ဤအချက်အလက်ကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။အပေါ်မှပေးထားသော ဝန်ထိန်းခြင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်ကိုလည်း ကြည့်ပါ။...
22-04-04 တွင် admin မှ
ကွင်းဆက်များကို သယ်ဆောင်ရန်၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များ သယ်ဆောင်ရန်နှင့် ဆွဲတင်ရန်အတွက် ဝန်များကို မကြာခဏချည်နှောင်ရန် အသုံးပြုသည် - သို့သော်၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အကြံအဖန်လုပ်ငန်း၏ ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီး ရုတ်သိမ်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည့်ကွင်းဆက်သည် အချို့သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီရမည်ဖြစ်သည်။ကြိုးသိုင်းကြိုးများသည် လူကြိုက်အများဆုံးများထဲမှ အချို့သော...
Chain Slings စစ်ဆေးရေးလမ်းညွှန်ဆိုတာဘာလဲ။(မာစတာလင့်ခ်များ၊ အတိုကောက်များ၊ ချိတ်ဆက်လင့်ခ်များ၊ လောက်လွှဲချိတ်များပါရှိသော အဆင့် 80 နှင့် အဆင့် 100 အဝိုင်းလင့်ကြိုးများ)
22-04-03 တွင် admin မှ
ကွင်းဆက်ကြိုးများ စစ်ဆေးခြင်းလမ်းညွှန် (အဆင့် 80 နှင့် အဆင့် 100 အဝိုင်းလင့်ကြိုးများ၊ မာစတာလင့်ခ်များ၊ အတိုကောက်များ၊ ချိတ်ဆက်လင့်ခ်များ၊ စလင်းကြိုးချိတ်များပါရှိသော) ▶ ကွင်းဆက်ကြိုးများစစ်ဆေးခြင်းကို မည်သူလုပ်ဆောင်သင့်သနည်း။ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ...
admin မှ 22-02-18 ရက်နေ့တွင်
(ကမ်းလွန်ကွန်တိန်နာတင်သည့်အစုံအတွက် မာစတာလင့်ခ်/ တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည်) IMCA အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် အအေးမိသောကျိုးပဲ့မှုကြောင့် ကမ်းလွန်ကွန်တိန်နာတစ်လုံး၏ အကြံအဖန်မအောင်မြင်သည့်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကို အစီရင်ခံခဲ့သည်။နှစ်ယောက်စလုံးမှာ တိုင်ကီတစ်လုံးနဲ့...
Bucket Elevator က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
Round Link Chain Bucket Elevator နှင့် Belt Bucket Elevator ဓါတ်လှေကားပုံးတစ်ပုံး အလုပ်လုပ်ပုံ ဓါတ်လှေခါးပုံးများသည် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် များပြားလှသော ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်သည့် ပို့ဆောင်ပေးသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်သည်...
SCIC Short Link Chains Delivery for Aquaculture Mooring
အတိုချုံးကွင်းဆက်၊ အလတ်စား လင့်ခ်ကွင်းဆက်နှင့် လင့်ကြိုးရှည်များကို အများအားဖြင့် ငါးသားဖောက်ခြင်း (သို့မဟုတ် ငါးမွေးမြူခြင်း) တွင် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး လင့်ကြိုးတိုများသည် EN818-2 အတိုင်းအတာနှင့် အဆင့် 50 / grade 60 / grade 80 တို့တွင် ချည်နှောင်ထားပါသည်။ Aqua ကို တန်ပြန်ဖို့ အပြီးသတ်ပါ...
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက် Round Link Chains ကို သိပါ။
1. သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအတွက် ကွင်းဆက်ကွင်းဆက်များ ကမ္ဘာစီးပွားရေးတွင် ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင် လိုအပ်ချက် တိုးမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ရေး စက်ယန္တရားများ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ကျောက်မီးသွေးတွင်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စက်မှုလယ်ယာစနစ်ဖြင့် ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ခြင်း၏ အဓိက ကိရိယာများအနေနှင့် ထုတ်လွှင့်မှု...
Round Link Chain အသုံးပြုမှု၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန်ချက်ကို ရုတ်သိမ်းခြင်း။
1. ကွင်းဆက်ကွင်းဆက်အဝိုင်းကို ရုတ်သိမ်းခြင်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း (1) အဆင့် 80 ဂဟေဆော်ထားသော ဆွဲကြိုး WLL နှင့် အညွှန်းကိန်း ဇယား 1- WLL ကွင်းဆက်ကြိုးလွှဲခြေထောက်(များ) ထောင့် 0°~90° လင့်ခ်အချင်း (မီလီမီတာ) Max.WLL Single leg t 2-...
Slag Extractor Conveyor Chains နှင့် Scrapers များကို ဘယ်လို အစားထိုးမလဲ။
slag extractor conveyor chain ၏ ဟောင်းနွမ်းမှုနှင့် ရှည်လျားမှုသည် ဘေးကင်းသော အန္တရာယ်များကို သယ်ဆောင်လာရုံသာမက slag extractor conveyor chain ကိုယ်တိုင်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုလည်း တိုစေပါသည်။အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ slag extractor conveyor chains နှင့် scrapers များအစားထိုးခြင်း၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည်။...
Lifting Chains 20x60mm အလွိုင်းသံမဏိ 23MnNiMoCr54
လွှင့်တင်ရန်အတွက် SCIC သံကြိုးများကို DIN 17115 စံနှုန်းအလိုက် နီကယ်ခရိုမီယမ် မိုလီဘဒင်နမ် မန်းဂနိစ်အလွိုင်းစတီးဖြင့် EN 818-2 စံနှုန်းများအတိုင်း ပြုလုပ်ထားသည်။ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းဆွဲ/စောင့်ကြည့်ထားသော ဂဟေဆော်ခြင်း နှင့် အပူ-ကုသခြင်း သည် စမ်းသပ်မှု အင်အား၊ ချိုးဖျက်မှု အင်အား၊ elo...
Mining Flat Link Chains များကို တွဲချိတ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်း
admin မှ 21-09-06 ရက်နေ့
Mining Flat Link Chains များကို တွဲချိတ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်း။အဝိုင်းစတီးလ်လင့်ခ်ကွင်းဆက်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် နှစ်ပေါင်း 30 ကြာ သတ္တုတွင်းချိတ်ဆွဲကြိုးများကို တွဲချိတ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းလမ်းများကို မျှဝေခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။...